Madaxweyne Qaran mise Madaxweyne Qabiil ? W/Q: Kamal Ahmed Hurre
Wednesday August 01, 2018 - 18:48:43 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Madaxweyne qaran waa kii ay usiman yihiin ee aysan u kala dhaweyn umadiisu, waaka u cadaalad sameeya raciyadiisa ama shacabkiisa markay isqabtaan , sidoo kale madaxweyne qaran waa ka u garsoora masuuliyiinta uu xilka u igmaday markay isqabtaan ee aan kay isxigaan garabka saarin.
Waxaa wax laga yaqyaqsoodaa oo nidaamka dawladnimada Somaliland gef iyo ceebku ah , islamarkaasna sharaf dhac ku ah Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in masuuliyiinta xilalka ka haysa Xukuumadiisa , sida wasiirada iyo agaasimayaasha guud markay is qabtaan uusan madaxweynuhu is cadaalad ah ugu garsoorin lkn uu garabka saaro kay isxigaan gar iyo
Waxaa tusaale cad u ah arintaas; Wasiirka Warfaafinta Somaliland Cabdiraxmaan Guribarwaaqo iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradaas ayaa khilaaf ka dhex dhacay dabadeedna Wasiir Guribarwaaqo ayaa maanta oo taarikhdu tahay 31-7-2018 uu shaqadii ka joojiyey mudo 3 bilooda Agaasimihii Guud ee W. Warfaafinta Cali Maxamed Cali isagoon sheegin wax sababa. Wasiir Guribarwaaqo waxa uu shaqa joojinta aan sababta lahayn ugu sameeyeye waayo waxa uu haystey kalsooni uu ku qabo madaxweynaha uu ay isku qabiil yihiin, agaasimaha guudna waxa uu kasoo jeedaa Sanaag Bari ama degmada Badhan. Waana agaasimaha keliya ee deegaanadaasi ku leeyihiin Xukuumada Biixi.
Si kastaba ha ahaatee Waxaa wax laga murugoodaa in isla maanta Madaxweyne Biixi xilkii ka qaaday Agaasimihii Guud ee W. Warfaafinta Cali Maxamed Cali. Madaxweynuhu umuu garsoorin labadiisii masuul lkn waxa uu dhinaca saaray wasiirka oo ay isku hayb yihiin. Xitaa haduu madaxweynuhu agaasimaha wasaarad kale u badalilahaa xal ayay noqon lahayd oo sidan
way dhaami lahay. Falalka noocaas ahi waxay dhabar jab ku yihiin sunaha maamul iyo dawladnimo, islamarkaana waxay niyadjab , calool xumo iyo kalsooni la’aan ku abuurayaan musuuliyiinta kale ee xilalka ka haysa Xukuumada Biixi ee ka soo jeeda deegaanda Sool, Badhan iyo Buuhoodle oo markii horeba cadaalad darro ka tirsanayey Xukuumada Biixi. Ficiladaas oo kale waxay abuurayaan kalsooni la’aan lagu qabo madaxweynaha ; in dadka qaarna ay ku takrifalaan oo siday doonaan u adeegsadaan nidaamkii iyo haykalkii dawladnimo iyagoo kalsooni ka haysta madaxweynaha, qaarna xilalkooda ugudan kari waayaan kalsooni la’aan iyo shaki ay ka qabaan madaxweynaha. Ugu danbayn, waxaaan leeyahay qaran iyo qabiil meel mawada galaan. Cadaalad darro waa xaaraan , xaaraantuna ma waarto. Falalkan oo kale haduu ku sii socdo madaxweyne Biixi waxaa
uu kaw ka noqonayaa cida neceb midnimada, wadajirka, wax wadalaahansha, dawladnimada, yaraynta qabyaalada Ummada Reer Somaliland.